Daniel Martín Serrano. Kubvunzana nemunyori we Insomnia | Zvazvino Zvinyorwa
Daniel Martin Serrano yakave yakatangwa munoverengeka ine zita dema dema, Insomnia. Asi iyi Madrilenian yatove nenhoroondo refu se akateedzana scriptwriter terevhizheni pakati payo pane Central Hospital, vherevheti, Bofu kumisangano, Muchinda, Kumukira y Makungwa akakwirira. Uye zvakare, iye ari purofesa weTerevhizheni script kuMadrid Film School. Muizvi indavhiyu Iye anotiudza nezvenhoroondo yake uye nezvimwe zvakawanda. Ndinotenda zvikuru mutsa nenguva iyo yaakakumikidza kwandiri.
Daniel Martín Serrano - Bvunzurudzo
MAGWARO MAZUVA ANO: Kutonhora kudaro, mutinhimira uye manyorero echinyorwa kana rwiyo rwekufungidzira nehunyanzvi? Kana nei uchisarudza?
DANIEL MARTÍN SERRANO: Pakupedzisira zvese ndezve kutaura nyaya. Maitiro akasiyana, hongu, asi chii chinoita mutsauko wakanyanya script yenyaya ndiyo nzira yekushanda. Kunyora zvinyorwa iboka rekuyedza iro vanhu vanoverengeka vanotora chikamu uye iwe uine maonero evanogadzira, maratidziro uye mapuratifomu, saka akawanda esarudzo anoitwa pamwechete. Kana ndatarisana nebhuku, inini ndega ndinoita sarudzo idzi, ndini ndinosarudza zvinoitika uye kuti zvinoitika sei. Uye zvakasiyana nenzira yekushanda pane chinyorwa, dzimwe nguva rusununguko urwo runyorwa runondipa rwunokosheswa.
Asi ini handina chandinofarira che script kana novel, kana zvirinani kuti kwandiri ndisarudze imwe kana imwe. Muzviitiko zvakawanda ndiyo nyaya yaunoda kutaura iyo inosarudza kuti inoda kuudzwa sei, kana iri muchimiro chechinyorwa, chinyorwa, nyaya uye kunyange mutambo.
AL: Nebasa rakareba semunyori wezvekunyora, iwe urikugadzira dheti rako mune rakachena uye rakareruka zvinyorwa neruzivo mune nhema nhema, Insomnia. Sei uye chii isu tiri mazviri?
DMS: Sezvo mune ingangoita basa rese munhu arikufunga matambudziko matsva uye kunyora iyi novel yaive yangu. Mushure memakore ndichinyora zvinyorwa uye ndatanga mamwe emanoveli ndakafunga kuti ndinofanira kupedzisa rimwe, ndiratidze kuti aigona kuita saizvozvo. Icho ndicho chikonzero changu chekutanga. Kuve ndakwanisa kuiburitsa kare yatodarika zvandaitarisira pakutanga.
En Insomnia muverengi achawana nhema nhema, yakasviba kwazvo, iine zvirongwa zviviri, imwe yakaverengwa munguva yakapfuura uye zvimwe panguva ino. Mukutanga, protagonist, Thomas Abad, muongorori we mupurisa mukutarisira kwekutsvaga iyo muurayi yevakadzi vakasiyana. Kana nyaya ichifambira mberi uchaona izvozvo mukoma wake neimwe nzira kubatanidzwa. Kuedza kukuchengetedza iwe unopedzisira warasikirwa nebasa rako.
Muchikamu chiripo, Tomás anoshanda husiku sa muchengeti kubva kumakuva uye uko, achishungurudzwa nemumwe munhu akavanda mumimvuri, anoziva kuti nyaya yacho haisati yavharwa.
Insomnia ingano ine zano riri kuramba richiwedzera uye izvo hazvipe zororo kune muverengi. Ane chaizvo mhepo yakanaka, hunhu hunotungamira hweavo vanopinda mumweya wako uye, hazvina kunaka kwandiri kuti ndizvitaure, asi ndizvo zvakanyatsonyorwa. Zvino zvichava vaverengi vanofanira kuzvitonga.
AL: Kudzokera munguva, unoyeuka bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
DMS: Kuverenga kwangu kwekutanga, senge kwevakawanda vezera rangu, aive mabhuku ari muunganidzwa weB.Steam uta, Vashanu, Jules Verne, Agatha Christie...
Kana chiri chekutanga chinhu chandakanyora handina ndangariro yakajeka, ini ndozviziva izvozvo kuchikoro pawaifanira kunyora aimbomira. Zvishoma nezvishoma, hongu ndakatanga kunyora nyaya uye nekudaro ndanga ndichigadzira imwe mhando yekuda izvo zvakaita kuti ndinyore zvakanyanya uye zvakanyanya. Pessoa akati kumunyorera yaive nzira yake yekuve ega uye ndinonyatso bvumirana neshoko iro.
AL: Iri bhuku rakabata mweya wako raive ...
DMS: Zvakawanda. Ini handina kukwanisa kusarudza imwe. Iwo mabhuku andiri maari kuziva basa remunyori kumashure kwavo andimaka. Ndinogona kukutumidza Mukoko wenyuchi, kubva kuCela, Hwakapfava husikunaFitzgerald, Guta nembwa, naVargas Llosa, Kuchema kwezizi, naHighsmtih, Nefando naMonica Ojeda, mazhinji emanoveli aMarías ...
AL: Uye iye anonyanya kufarira rezita kana kurudziro? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
DMS: Pamwe ndizvo Javier Marias munyori ndinogona kutaura zvakanyanya zvinondikurudzira. Ndakatanga kumuverengera panguva iyoyo pazvakatanga kuve pachena kuti ndaida kuzvipira kunyora. Maitiro ake, nzira yake yekuudza chimwe chinhu chandinonyanya kufunga nezvacho. Asi kune mamwe akawanda: Vargas Llosa, Garcia Marquez, Lobo Antunes, Richard Ford, Patricia highsmith, Joyce Carol anodya, Sofi Oksanen, Martin Gaite, Dostoevsky, Pessoa...
DMS: Iyo novel iyo ini yandinowanzo verenga yakawanda iri Mukuru Gatsby uye ndiye mumwe wevatambi wandinofarira zvakanyanya mumabhuku. Zvese zvebasa raFitzgerald rizere nemavara ane akawanda matete aunowana mune yega yega kuverenga. Uye Gatsby ndomumwe wevandinofarira mavara.
DMS: Handina kana mania akakosha kwazvo kana zvasvika pakunyora. Chandinogona kutaura ndechekuti Ndiri nehana kwazvo, ndinonyora uye ndinonyorazve zvakawanda kusvikira ndagutsikana nemhedzisiro. Ini handisi munyori anokurumidza, ndinofunga uye ndinofungisisa zvakawanda pamusoro pematanho ekutora ese ari munoverengeka uye mune chinyorwa nekuti ndine chokwadi chekuti basa rakanaka rinopa mibairo yakanaka.
Uye iro basa rekunyora richiri basa uye, sekudaro, Ndinoedza kunyora mazuva ese, Ndine purogiramu yangu, ini handisi mumwe weavo vanotorwa nekufemerwa, zvinotora zvishoma. Uyewo Ini ndinoda kuve nemapurojekiti akati wandei akabata panguva imwe cheteSaka kana ndikabatirirwa neimwe, ndinogona kutora imwe ndoramba ndichienderera kumberi. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekukunda iyo blockages, kurega nyaya dzizorore kwekanguva.
Y panguva yekuverenga pamwe chete hobby yandinogona kuve nayo ndeyekuti ndinoda kunyarara, hapana chinondikanganisa.
DMS: Ini ndinowanzo nyora kumba, asi nguva nenguva ndinoda kuchinja kuenda ku cafeteria, one raibhurari. Iko kuchinja kwenzvimbo, sekutaura, Zvinondibatsira kubuda kunze uye kusava nemanzwiro ekugara uchishanda munzvimbo imwechete. Ichokwadi kuti denda rakachinja tsika iyi kwandiri, asi ndinovimba pane imwe nguva kuti ndikwanise kuitangazve.
AL: Mamwe mavara emhando anokufadza?
DMS: Icho chokwadi chekuti yangu yekutanga runyorwa ndeye mhosva kana hutsotsi genre hazvireve kuti ndiwo wandinofarira rudzi, kutaura zvazviri, ini handisi muverengi mukuru wetsiva yekunyepedzera. Chaizvoizvo zvandinoda, kunyangwe ichiratidzika sechokwadi, ndiwo mabhuku akanaka. Uye chii chiri bhuku rakanaka kwandiri? Uyo paunopedza kuiverenga iwe ziva kuti ichakuperekedza iwe hupenyu hwako hwese, iyo yandinoona kuti kumashure kune munyori akanaka uye ini ndinoona basa iro riinanova, rinoita kuti ndifunge, rinondisiya kumashure. Uye bhuku rakanaka zvakare ndere rinogadzira imwe godo mandiri, godo rine hutano, rekusaziva kana rimwe zuva ndichazokwanisa kunyora chimwe chinhu chakadai.
AL: Kuverenga kwako ikozvino? Uye iwe unogona kutiudza izvo zvauri kunyora?
WMD: Kuverenga kunoungana, Ini ndinotenga kupfuura zvandine nguva yekuverenga. Ini ndinowanzo kunonoka kuitira nhau izvozvi izvozvi ndiri kuverenga Bertha Island, naJavier Marías, uye ndine vamwe vazhinji patafura vakamirira nguva yavo.
Uye kana zviri zvandiri kunyora, izvozvi ndiri kushanda pane dzakateedzana izvo zvandisingakwanise kutaura zvakawanda nezvazvo asi izvo zvichaona mwenje gore rinouya uye akaedza kuumbika zvandinoda kuti zvive yangu yechipiri novel. Shanduko yerejista, inoverengeka yepamoyo uye yemunhu inotaura nezverudo, kwete yenhau yerudo, asi inoverengeka nezve rudo uye nemaonero atinoita kana kurarama mariri Mumakore ese, kubva pakuyaruka kusvika pane yatinoti zera repakati.
WMD: Zvakaoma. Ini ndinofunga kune mhando ye kukurumidza kwekuda kushambadzira izvo dzimwe nguva chimwe chinhu chakakosha kupfuura zvazviri kuda kunyora. Chero bhuku, ingave inoverengeka, rondedzero kana chero imwe mhando, inoda nguva yebasa, yakawanda yekunyora uye kunyora zvekare uye zvinondipa ini kunzwa kwekuti zvinyorwa zvisina kunyatso shandwa zvinoburitswa uye, pamusoro pezvose, kuzvishambadza.
Chinangwa cheavo vanonyora ndechekuburitsa, hongu, asi munyori anofanirwa kunge achinyanya kuzvimanikidza pachake, kwete chero chinhu chinobatsira kuti chibudiswe zvisinei nekuti munhu anochida zvakadii, iwe unofanirwa kudzikisira iyo ego kune yakanyanya kana uchinyora. Imwe pfungwa yakashata kune yakawanda sekuburitswa kwayo izvozvi kuona kuti akanaka kwazvo enganonyorwa asingaonekwe uye mamwe asina kujeka anobudirira. Dzimwe nguva kukwidziridzwa pamasocial network kunoshanda kupfuura hunhu hwenyaya yacho pachayo. Ndinovimba izvi zvinoshanduka.
AL: Ungadai waifungidzira chinyorwa cheakakosha nguva yatiri kurarama mairi? Iwe unogona kunamatira nechimwe chinhu chakanaka kana chinobatsira kune yemberi nyaya?
DMS: Pakagara paine nyaya dzerudzi rweapocalyptic iyo, neiyi covid, ndiyo yepedyo yatakange tiri kwavari. Ichokwadi kuti kurarama mumunhu wekutanga kwakasiyana, asi kana ini ndaifanira kugara nechimwe chinhu chakanaka, zvine kugona kutsungirira kwepfungwa kwatakadzidza isu tese kukura. Ichokwadi kuti dzimwe nguva zvinoita sekunge munhu asvika pamuganhu wekusurukirwa, kufinhwa uye kusaona kupera kwehusiku uku. Asi ini ndinofunga izvo, mune zvakajairika mazwi, ndiani mumwe asinganyatso kuziva maitiro ekugadzirisa nazvo nenzira yakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Daniel Martín Serrano. Kubvunzana nemunyori weInsomnia